IBellavista Bayview-ixabiso elikhulu kufutshane nolwandle! - I-Airbnb
IBellavista Bayview-ixabiso elikhulu kufutshane nolwandle!
IBellavista Bayview ibekwe ngokugqibeleleyo, iboniswe kakuhle, ibhedi enye eAngels Beach East Ballina. Inencasa equkiweyo, iTV entle kunye neNETFLIX.
Uyakonwabela iimbono zolwandle ukusuka kumandlalo wakho okhululekileyo kakumkanikazi. Ulwandle kunye nohambo oluselunxwemeni lumalunga neemitha ezili-150 kuphela.
Indlu ibekwe kumgangatho osezantsi wendlu yethu enemigangatho emibini. Ikhuseleke ngokupheleleyo kwaye ibucala kuyo yonke indawo yokuhlala. Kukho igumbi elinye elinebhedi ye-Queen, indawo yokuphumla, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlamba eyahlukileyo kunye negadi enendawo yepatio enelanga.
4.96 · Izimvo eziyi-427
Sikwindawo yokuhlala ethe cwaka elunxwemeni. Angels Beach kunye nendlela ekwabelwana ngayo elunxwemeni ikumgama nje weemitha ezili-150. Zombini zintle kwaye zibonelela ngamava okwenene aseNorth Coast; Ulwandle olungaxinananga nolungqongwe ziindunduma ezineebhanki kunye nehlathi elinemvula.
Unokuhamba ecaleni kwendlela yonxweme ukuya kwiikhefi ezinkulu ngaselwandle; ICafe yaseShelly Beach, iBelle General kunye neLighthouse Beach Cafe.
Ulwazi lwendawo: IBallina yidolophu ethandekayo eselunxwemeni emi kumlambo iRichmond River. Inikwa inkonzo yiSikhululo seenqwelomoya saseBallina-Byron Gateway, yiyure enye ukusuka eGold Coast kunye neyure ezi-2 ukusuka eBrisbane ecaleni kwendlela yePasifiki. I-Ballina iqhayisa ngeelwandle ezintle, ukusefa, ukuloba, ukukhwela isikhephe kunye namava e-hinterland. Ikufuphi needolophu zaseByron Bay, iBangalow kunye nelali enqabileyo yaseNewrybar. Iindawo zokutyela ezisemgangathweni, iiklabhu kunye neevenkile zekofu zigcwele kulo mmandla.
Ulwazi lwendawo: IBallina yidolophu ethandekayo eselunxwemeni emi kumlambo iRichmond River. Inikwa inkonzo yiSikhululo seenqwelomoya saseBallina-Byron Gateway, yiy…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-1619
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- East Ballina